လုပ်ငန်းသို့မဟုတ်အပန်းဖြေဘို့ခရီးသွားလာခြင်းရှိမရှိ, တဦးတည်းကသူတို့ဦးတည်ရာကိုရစီးပွားရေးနှင့် chartering ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်ပျံအကြားရွေးချယ်နိုင်. ယနေ့ခေတ်, များစွာသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များကြောင့်နှစ်သိမ့်ခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှအဆုံးစွန်သောအဘို့ရွေးချယ်လေ့. ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ပျံသန်းမှုအမျိုးမျိုးသောစိန်ခေါ်မှုတွေရှိ, အချို့သောလေကြောင်းလိုင်းများ၏အပြောင်းအလဲမြန်စွမ်းဆောင်ရည်ကနေထွက်ခွာ delay လုပ်ခြင်းတက်အဆုံးသတ်ကြောင်းတင်းကြပ်လုံခြုံရေးစည်းမျဉ်းအထိ.
အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးကအကြီးစားဂျက်ပဋိညာဉ်စာတမ်းပျံသန်းမှု Service ကိုသုံးပါ?
စီးပွားဖြစ်လေကြောင်းလိုင်းနှင့်အတူမတူဘဲ, စင်းလုံးငှားလေယာဉ်ခရီးစဉ်တစ်ဦးဟာသူတို့ရဲ့သီးခြားလိုအပ်ချက်များနှင့်လိုအပ်ချက်များကိုကိုက်ညီမယ်လို့လေယာဉ်မျိုးကိုရွေးချယ်ဖို့ခွင့်ပြု. There’s also the flexibility to fly when, ဘယ်မှာနှင့်မည်သို့တဦးတည်းလိုလား. ထိုအခါရှေးခယျြမှုနှင့်အတူကနေထွက်သွားဖို့ဒါမှမဟုတ်တထောင်အများအပြားလေဆိပ်နေရာများမှပျံသန်း, တစ်ဂျက်စင်းလုံးငှားလေယာဉ်ခရီးစဉ်ဝန်ဆောင်မှုရုတ်တရက်ဒါနှစ်သက်ဖွယ်ပုံရသည်.
ခွင့်ပြု, private jets are largely similar to commercial aircraft in terms of actual flight time required to reachacertain destination. တဦးတည်းပင်ဝေးလံသောနေရာများမှပျံသန်းနိုင်စွမ်းစဉ်းစားသောအခါမူကားတစ်ဦးမိုးသည်းထန်စွာဂျက်စင်းလုံးငှားသုံးပြီး၏အစစ်အမှန်အကျိုးခံစားခွင့်သိသာဖြစ်လာ. စင်းလုံးငှားလေယာဉ်ခရီးစဉ်နှင့်အတူ, တဦးတည်းအသေးစားပုဂ္ဂလိကစစ်လက်နက်သို့မဟုတ်ကြီးမားသောမြို့ပြလေဆိပ်နှင့်ထံမှမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အချိန်ဇယားအပေါ်ပျံသန်းနိုင်သည်.
ဒါဟာလေယာဉ်ပြောင်းရှိခြင်းမဟုတ်၏အဆင်ပြေစေရန်နှင့်အတူကြွလာ, သောတစ်ခါတစ်ရံကွဲလွဲပျံသန်းအချိန်ဇယား၏ကြိုတင်ညှိနှိုင်းလိုအပ်ပေလိမ့်မည်. One also doesn’t have to deal with the hassles of baggage, လူစည်ကားလေဆိပ်အတွက် layovers, not to mention the dread of delayed/cancelled flights.
The amenities on private jets are simply miles apart from those available on commercial flights. Generally, the client can expect catering and entertainment, sumptuous sitting and the ability to get up to stretch one’s legs. And because privacy is guaranteed, တဦးတည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်သွားရန်သို့မဟုတ်ရိုးရှင်းစွာဖြေလျော့ဖို့ရွေးချယ်နိုင်ဖြစ်စေ. အဆိုပါခရီးသည်ကသူတို့လေယာဉ်ခရီးစဉ်အတွေ့အကြုံပြည့်စုံထိန်းချုပ်မှုတွင်လည်းဖြစ်ပါသည်, အာကာသမျှဝေတစ်ခုတည်းသောလူများကိုဖိတ်ကြားဧည့်သည်များဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူ, ရှိလျှင်.
တစ်ဦးစင်းလုံးငှားဂျက်လေယာဉ်နှင့်အတူ, one gets to travel in the company of people they’re well familiar with. ပျောက်ဆုံးခြင်းသို့မဟုတ် mishandled အိတ်များ၏အန္တရာယ်နီးပါး Non-တည်ရှိမ. ပဋိညာဉ်စာတမ်းကိုကုမ္ပဏီအားဖြင့်နှံ့နှံ့စပ်စပ်ဆောင်မှုများကိုစစ်ဆေးခြင်းခံယူအပြင်, သင်္ဘောသားအဖွဲ့ဝင်များကလည်းကျယ်ပြန့်လေယာဉ်ခရီးစဉ်စစ်ဆင်ရေးအပေါ်သင်တန်းနှင့်ခရီးသည်ကိုင်တွယ်ခံယူ.
ခရီးသွားကုန်ကျစရိတ်များသောအားဖြင့်အချိန်စောင့်ဆိုင်းကဲ့သို့အခြားအကြောင်းရင်းများနှင့်အတူလိုရာခရီးရဲ့ရွေးချယ်မှုကဆုံးဖြတ်ကြသည်, နေ့ချင်းညချင်းစွဲချက်များနှင့်လေယာဉ်ခရီးစဉ်အတွက်ခရီးသည်အရေအတွက်က. သို့သော်, စျေးနှုန်းများအမြင့်ဆုံးလိုအပ်ချက်ကာလအတွင်းမှာတိုးမြှင့်ဖို့လေ့. ပြန်သွားအစီအစဉ်များကိုလည်းအကောင့်ကိုယူရပါမည်; တဦးတည်းတစ်လမ်းလေယာဉ်ခရီးစဉ်စီစဉ်လျှင်, they’ll often be charged for the plane’s return journey.
သို့သော်အချိန်နှင့်သီးသန့်တန်ဖိုးထားသောသူတို့အဘို့, ထို့နောက်တစ်ဦးမိုးသည်းထန်စွာဂျက်စင်းလုံးငှားလေယာဉ်ခရီးစဉ်ဝန်ဆောင်မှုအဆုံးစွန်ဖြေရှင်းနည်းဖြစ်လိမ့်မယ်. ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်အဆင်ပြေနှင့် privacy အကယ်စင်စစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတန်ဖိုးရှိများမှာ. ပုဂ္ဂလိကပျံသန်းသည့်အခါ, တဦးတည်းလည်းသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတက်ရောက်ရန်အာကာသအများကြီးရှိပါတယ်.
Gulfstream V ကို
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Express ကို